Recorder | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label Recorder. Show all posts
Automatic Call Recorder Pro v4.15 Apk
Android OS ဖုန်း အသုံးပြု သူတွေ အတွက် ကိုယ် ဖုန်းပြော ထားတဲ့ ဖုန်း call တိုင်းကို အသံဖိုင် အနေနဲ့ auto record လုပ် သိမ်းဆည်း ပေးထား မယ့် Auto Call Recorder Pro v4.15 apk ကို တင်ပေး လိုက် ပါတယ်။
ဖုန်း call အ၀င်ရော ၊ အထွက်ရော အသံ ကြည်လင်စွာနဲ့ (supports wav, ANR, 3gp formats. ) auto record လုပ်ပေး ထားမှာပါ။
google play မှာ 26.23 ဒေါ်လာ ပေးဝယ် သုံးစွဲ ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဒီဆိုဒ် မှာတော့ free download ရယူနိုင်ပါတယ် ..
အောက်က Link မှာ ရယူနိုင် ပါတယ်။
From : www.winhlaing.org ဝင်းလှိုင်(နည်းပညာ)
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, April 19, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, Recorder
ဒီတစ်ခါ တင်ပေး တာကတော့ FB က ညီ တစ်ယောက်က တောင်းထား လို့ သူ့ အတွက် ရှာပေး ရင်းနဲ့
လိုအပ် သူများပါ အသုံးပြု နိုင်အောင်လို့ ပို့စ် တစ်ခု အနေနဲ့ တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ဘယ်လို အသုံးဝင် တယ်ဆိုတာ တောင်းထားတဲ့ ညီလေးရဲ့ စာထဲမှာ အပြည် အစုံ ပါပြီး သားမို့ အောက်
မှာ သာ ဖတ်ကြည့် လိုက်ပါ။
အစ်ကို တစ်ခုလောက် ထပ် ကူညီပါလား အစ်ကို Dragon Remote ဆော့ဝဲလ်လေး လိုချင် လို့ပါခင်ဗျာ...
ဒီကောင်လေးက ပြောလိုက်တဲ့ စကားသံကို ပုံမှန် ရီကော့ လုပ်ပေးတဲ့ အပြင် စာသား အဖြစ်နဲ့
ပါ ပြန်လည် ဖော်ပြ ပေးပါတယ် သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာ လုပ်ငန်း တွေနဲ့ အရေးကြီး လုပ်ငန်း တွေမှာ သုံးပါတယ်...
ကျောင်းသား တွေလည်း သုံးလို့ ရပါတယ်.. ဆရာ သင်တဲ့ စာကို နောက်ကနေ လက်ချာ လိုက်ရေး စရာ မလိုတော့ ဘူးလေ ဖုန်းထဲမှာ ထည့် ထားပြီး ဖွင့်ထား လိုက်ရင် အဆင်ပြေ သွားပြီလေ...
ကျွန်တော်က ကျောင်းသားပါ လက်ရေး အရမ်းနှေးတော့ စာတွေ လိုက်မရေး နိုင်လို့ပါ... ကူညီပါ အစ်ကို ဘယ်လို ဒေါင်းလော့ ဆွဲရ မလဲ မသိဘူး လင့်ချပေး ပါလား အစ်ကို...
The Android Remote Microphone will work on devices using OS 2.2 and higher. It’s easier than ever to use this app with Dragon NaturallySpeaking version 12. Simply use the camera on your device to scan the barcode.
Once the Remote Microphone App is installed, you will need to createaprofile in Dragon NaturallySpeaking or Dragon Dictate. Steps include:
• Ensure your PC or Mac and Android device are connected to the same WiFi network. Note: if there are firewalls in your network, the app might not communicate successfully with Dragon.
• In the settings of the app, to set up the profile you will need the following (this information is presented to you when you createaprofile selecting the Dragon Remote Microphone in Dragon NaturallySpeaking and Dragon Dictate):
• You are now ready to get started using the Android Remote Microphone and Dragon NaturallySpeaking 12!
Added support for Jelly Bean.
Some localization bug fixes.
Updated : November 5, 2012
အောက်မှာ လင့် ၃ ခု ပေးထားပါတယ် ကြိုက်ရာလင့် တစ်ခု ကနေ နှိပ်ပြီး ဒေါင်းယူပါ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, March 01, 2015 No comments:
ဖုန်းခေါ်ဆို မှုကို Record လုပ်ပေးမယ့် Call Recorder v1.6.6 apk
Android OS ဖုန်း Tablet ကိုင်ထားသော ဘော်ဒါတို့ အတွက် အသုံးပြုသင့်တဲ့ app လေးတစ်ခုဖြစ်
မိမိဖုန်းမှာ တစ်ဖက်သူနဲ့ ပြောဆိုတာတွေကို အသံသွင်းယူ သိမ်းဆည်း ထားပေး နိုင်ပါတယ်။
Size 3.7MB ရှိပါတယ် 2.2 အထက် ဖုန်းအားလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်ဗျာ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, February 03, 2015 No comments:
Apowersoft Streaming Video Recorder 4.9.6 DC 01.02.2015
Apowersoft Streaming Video Recorder 4.9.6 DC 01.02.2015 | 22.64 MB
▼ hugefiles.net ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, February 02, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Recorder, Video-software
Apowersoft Streaming Video Recorder 4.9.4 Multilingual | 22.64 MB
Mirillis Action! 1.20.2.0 Multilanguage
Mirillis Action! 1.20.2.0 Multilanguage | 20.07 MB
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, January 03, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Editor, Recorder, Screen-captures, Video-software
အခြားသော Call Recorder များထက် ပိုပြည့်စုံ ကောင်းမွန်တဲ့ Call Recorder-ACR v10.6 apk
Call Recorder ဆိုတာမျိုးက ဖုန်းထဲမှာ မရှိမဖြစ် ရှိထားရမယ့် App မျိုးမဟုတ်ပေမယ့် ရှိထားမယ် ဆိုရင်တော့
ပိုကောင်း တာပေါ့ဗျာ။ လိုအပ်လာတဲ့ အချိန်မှာ အချိန်မရွေး လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Feature ကတော့ အများကြီး ပဲဗျာ။ အခြား Call Recorder တွေထက် ပိုကောင်းတဲ့ အချက်လေးကို ကျွန်တော်
ရှင်းပြချင်ပါ တယ်။ မိမိ Record လုပ်ချင်တဲ့ Phone Recorder တွေကို Email ထဲသို့ အလိုလျှောက် ပို့ပေးနိုင်ပါ
တယ်။ ဒါ့ အပြင် Record အဟောင်းများ ကိုလည်း Auto Delete လုပ်နိုင်အောင် Secure သက်မှတ် ပေးနိုင် ပါ
တယ်။ Record လုပ်ပြီးရလာတဲ့ အသံဖိုင်ကလည်း တိုးတိုးလေး ဖြစ် မနေပါဘဲ ပြန်ပြီးနားထောင်လို့အဆင်ပြေ
မယ့် အနေအထား မျိုးမှာရှိပါတယ်။
အဲလို သက်မှတ်ပေးနိုင်တဲ့ အတွက် ဖုန်းထဲမှာ Record File တွေ များပြီးလေး မနေတော့ ဘူးပေါ့။ Auto Record
လုပ်နိုင်သလိုပဲ အရေးကြီးတဲ့ ဒါမှမဟုတ် သီးသန့်သတ်မှတ်ချင်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်များကိုလည်း ရွေးချယ်ပြီး Record
လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဖုန်းခေါ်တိုင်း ဖုန်းနံပါတ်တိုင်းကို Record မလုပ်ပေး တော့ဘူးပေါ့။
Auto Record လုပ်ချင်တယ် ဆိုလည်း ရပါတယ်။
နမူနာအနေနဲ့ Screen Shot တွေ ကိုလည်း အောက်မှာ ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပါတယ်ဗျာ။
Debut Video Capture 2.05
Debut Video Capture 2.05 | 1.98 MB
Debut is designed to be very easy and intuitive to use, giving you the ability to record essentially anything from capturing video fromawebcam, your screen, or video input devices such asaVHS recorder within minutes of downloading. Record and capture video from almost any source even VHS tapes. And unlike other recording software, you can utilize key pre production features like video color, resolution, and output settings. Download Debut today and start building your video content library.
Home page : http://www.nchsoftware.com/capture/
▼ datafile ▼ OR ▼ tusfiles ▼
ကဏ္ဍ Recorder, Screen-captures, Video-software
Apowersoft Screen Recording Suite 3.4.0 Multilangual | 19.92 MB
– Record your PC screen
– Record Desktop Actions
– Record Streaming video, audio
– Record from Webcam
– Record from recording devices
– Record your favorite video and audio files from online video, music, radio sites, these multimedia formats can be transferred to your mobile devices or burn to DVD, so that you can share them with your friends and families. Record your game plays to show how cool you are in the game.
– Make courses about how to use windows7, create demo videos to demonstrate how to use computer software and record live video through Webcam about how to use something.
Home Page – http://www.screenrecord.net/
ကဏ္ဍ Recorder, Screen-captures
SkypeEar Skype Audio Recorder 5.2 | 1.06 MB
Skype Audio Recorder is the best automatic recording software to record VoIP voice conversations. It supports almost all VoIP software such as Skype, Yahoo Messenger, ICQ, Viber, Facebook, Hangouts, etc. You can use it to record your own voice chat on your computer, also you can use it to monitor other people (such as your child) who use your computer. Another advantage is this software can record both sides voice even if you takeaearphone. You need to set the process names to specify which software you want to record. Following are some process names of frequently-used VoIP software: Facebook – FacebookVideoCalling.exe, Hangouts – chrome.exe, Viber – Viber.exe, ICQ – icq.exe, Skype – Skype.exe, Yahoo Messenger – YahooMessenger.exe.
How to Record Skype Calls and Voice Conversations
1. Run Skype Audio Recorder.
2. TakeaPC-to-PC or PC-to-Phone voice conversation with Skype, Yahoo Messenger or Google Talk.
3. Skype Audio Recorder will start recording and save voice conversation to an mp3 file automatically.
OS : Windows XP,Vista,Window 7,Windows 8
Home Page - http://www.skypeear.com/index.htm
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, November 24, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Recorder, Skype
Total Recall Call & Call Recorder FULL v2.0.24 Apk
Call Recorder ဆိုတာ ကတော့ ဖုန်းထဲမှာ မရှိမဖြစ် ဆောင်ထားရမယ့် Application တစ်ခု မဟုတ်ပေမယ့်
ရှိထားဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်ဗျာ။ အရေကြီး ဖုန်းများခေါ်ဆိုရာမှာ မိမိ အတွက် ခိုင်မာတဲ့ အထောက်
အထား များ ရရှိ ထားအောင်လို့ ဒါလေးက လိုအပ်ပါတယ်ဗျာ။
လုပ်ငန်းခွင် အကြောင်း အရာများပြောဆိုနေ ကြတဲ့သူ များ အတွက်တော့ သေချာပေါက် အသုံးတည့်စေမှာ
ပါ။ Record လုပ်ထားတဲ့ Audio File များကလည်း အသံ ထွက်မှာကြည်လင်ပျက်သားမှုရှိပါတယ်။ နောက်
ပြီး အရေး ကြီးတဲ့ Record များ ကိုလည်း မပျောက်ပျက် aစဖို့ အတွက် Gmail + Google Drive + Box +
DropBox + Evernote + SoundCloud စတာတွေမှာ Upload တင်ထားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
AMR, WAV, 3GPP & MP3 စတဲ့ Format များ အဖြစ် Save ထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.3 နှင့်
အထက် ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ဗျာ။
Video Booth Pro 2.6.3.6 Multilingual
Video Booth Pro 2.6.3.6 Multilingual | 11.53 MB
ကဏ္ဍ Animation, Editor, Photo Software, Recorder, Video-software
Snooper 1.44.9 | 7.43 MB
Here are some key features of “Snooper”:
ကဏ္ဍ Audio, MP3, Recorder
Absolute Sound Recorder 4.8.0 + Final + Key
မိမိတို့ ကွန်ပြူ တာ ထဲမှာ Winamp , Windows Media Player, Quick Time, Real Player , Flash, games,
တွေထဲက Music Sound တွေကို recording လုပ်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် ဒီဆော့ဝဲလေးကိုဆောင်ထားလိုက်ပါ။
သူ့မှာနောက်ထပ် ပါဝင်တဲ့ Features တွေက skype or gtalk က အသံဖိုင်တွေကို လည်း recording လုပ်ယူနိုင်
တဲ့ အပြင် မိမိ recording လုပ်ယူထားတဲ့ အသံဖိုင်တွေ ကိုလည်း WAV, MP3 and WMA စသည် တို့ကိုလည်း
Full ဖြစ်စေဖို့အတွက် ဒေါင်းလော့စ်ဖိုင်ထဲမှာ Key ကီးထည့်ပေးထားပါတယ်။
အောင်ကျော်ခိုင် (ပုသိမ်) by ရန်ကုန်သား
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, November 12, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Editor, Recorder
ဖုန်းထဲမှာ အသံတွေကို Record လုပ်ပေးမယ် - Call Recorder Full v1.6.2 APK
Android ဖုန်း နှင့်Tablet ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ဘော်ဒါတွေ အတွက် ဖုန်းပြောနေတဲ့ အသံများကို Record
လုပ်ပေးမယ့် apk လေးတင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ဖုန်း call အ၀င်ရော ၊ အထွက်ရော အသံ ကြည်ကြည် လင်လင်နဲ့ record လုပ်ပေး ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Record လုပ်ချင်းတဲ့ ဘော်ဒါတွေ အတွက် အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Android version 2.2 နှင့် အထက်ရှိတဲ့ ဖုန်းအားလုံးမှာ ဒီဆော့ဝဲလေးကို အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်ဗျာ။
▼ usersfiles ▼ (OR) ▼ solidfiles ▼